Siyaasiga Xuseen Aadan Cadde oo Ka Hadlay Xilka Qaaddista Lagu Sameeyay Xoghayihii guud ee Xisbiga WADDANI
(Hadhwanaagnews) Sunday, April 15, 2018 18:05:29
Hargaysa(HWN):-Guddoomiyaha gobolka Maroodijeex ee Xisbiga Mucaaridka ah ee wADDANI Mudane, Xuseen Aadan Cadde, waxa uu ka hadlay Xilka qaaddista lagu sameeyay Xoghayihii guud ee Xisbigaas Maxamed Cabdillaahi Uurcadde oo maalintii shalay ay guddiga fullinta ee Xisbigaasi ay Xilkii iyo Xubinnimaddiiba ka qaaddeen.
Siyaasiga Xuseen Aadan Cadde waxa uu sheegay in Maxamed Cabdillaahi Uurcadde aannu Shaqadda Xisbiga kolnabba Daacad u noqon, waxaannu daaha ka roggay in go’aankan uu Xisbigu ka soo saarray ay ahayd in wakhti horreba la qaato.
“Waan soo dhawaynayaa go’aanka ay guddiga fullinta ee Xisbiga WADDANI Xilkii iyo Xubinnimadiiba kaga qaaddeen Xoghayihii Xisbiga Maxamed Cabdillaahi Uurcadde. Kolay anigu in
badan ayaan ka hadlay arrinta Xoghayaha Xisbiga WADDANI haddii ay Warbaahinta tahay iyo haddii ay Xisbiga WADDANI dhexdiisa tahay-ba, waxaannay ahayd in Xisbigu uu waa hore go’aankaas qaato, waayo Maxamed Cabdillaahi Uurcadde marnaba shaqadda Xisbiga daacad kamuu ahayn, waanna la oggaa arrintaas.
Anigu waxaan ahay guddoomiyaha gobolka Marooddijeex, waxaanna Xilkaas la ii magacaabay 6/7/2017-ka, waxaannan muddo koobban ku bartay shaqsiyadda dhabta ah ee Xoghayaha guud ee Xisbiga WADDANI Maxamed Cabdillaahi Uurcadde, waannay muuqatay Wajiggaas uu maanta la soo baxay kii rasmiga ahaa ee uu Xisbiga ugu shaqaynaayay, waxaannu wada qabanay shaqaddii ugu horraysay, taasoo aan ku ogaadday inaanu Daacadnimo ku jirin, runtiinna anigoo aan guddoomiyaha dhaliil uga dhigayn, laakiin waxay ku habboonnayn inaannu Xisbiga halkan la soo gaadhin oo waa hore shaqadda laga eryo, waayo qof Maalintii WADDANI ah, habbeenkiinna KULMIYE ah sideebaa loogu kalsoonnaan karraa/” Ayuu yidhi Guddoomiye Xuseen Aadan Cadde
“Runtii Maxamed Kaahin iyo Muuse Biixi inkastoo ay ahaayeen Niman soo halgamay, haddana dhaqankoodda waynu garanaynaa. Wasiir Maxamed Kaahin sidii uu hadalka u dhigay Daacad kamuu ahayn, waxaanna la gudboon innuu dhex-galo beelaha walaalaha ah ee dirirtu dhex-martay oo uu Sharciga horkeenno Nimanka hurrinnaaya collaaddaa ee Boqor Buurmaddow ka mid yahay innuu soo qabto ayaannu eeggaynaa. Waxaan leeyahay intaas oo Milyan baad Wasiir u tahay ee fadhiga ka kac, ha u malayn inaad 4aad iyo 1aad umma talinnaysaan ee ummad dhan iyo qaran dhan baad u talinaysaa” Ayuu yidhi Guddoomiye Xuseen Aadan Cadde
Abdiqani Abdillaahi Ahmed (asporo)